Nylon cushion miaraka amin'ny faharetana tsara sy ny toetra mekanika tena tsara |
Telefaona: 0086- (0) 517-85636666
Famokarana matihanina amin'ny ampahan'ny fampidirana fiara ...
Manokana amin'ny famokarana crane nylon slider ...
slider Nylon avo lenta ho an'ny milina fanamboarana ...
Nylon cushion miaraka amin'ny fahaizany mivaingana sy excellen ...
Ny slc mc nylon maharitra ela dia avo lenta sy mateza
Afaka manome serivisy namboarina ho c ...
Famindrana indostrialy hamokatra nylon avo lenta ...
Afaka manome serivisy namboarina avo lenta M ...
manome serivisy namboarina amin'ny ascenseur avo lenta ...
Nylon cushion miaraka amin'ny faharetana tsara sy ny toetra mekanika tena tsara
Nylon cushion dia manana hamafin'ny hafanana, fanoherana mahery vaika, fanoherana miondrika, herin'ny fiantraikany ary fanitarana avo. Ny tanjaky ny famatrarana azy dia azo ampitahaina amin'ny vy, ary ny tanjaky ny havizanana dia mitovy amin'ny vy miharo vy sy aliminioma. .
Size: namboarina mifanaraka amin'ny fangatahana
fanompoana: Ataovy manokana araka ny sary
Origin: akora jiangsu huaian:nylon,PA6 / MC
anaran'ny vokatra:Fomba fizotran'i Mc nylon:Famolavolana tsindrona / fanodinana centrifugal / machining CNC
loko:Loko manokana santionany:Mpividy vola
Marika: Tsindrona Haida: fanariana centrifugal
1. Afaka miaro ny ambonin'ilay takelaka vy.
2 Maivana ary mora soloina. Nihena ny hamafin'ny asaNampivoarantsika technoiogy mandroso sy teknisiana za-draharaha mba hanohana ny matihanina namboarina karazan-jaza rehetra mifanaraka amin'ny takiana samihafa.
Fitarihan-kevitra: Ny fitaovan'ny nylon dia fantatra amin'ny tanjany avo, henjana avo lenta, fahaiza-mampifanaraka tsara, fampandehanana ambany, fanoherana ary fitoniana simika tsara. Ho fanampin'ny toetra mampiavaka ny ara-nofo nylon fitaovana, MC nylon manana lanjan'ny molekiola avo sy crystallinity avo. Noho izany, ny tanjaky ny fananana ara-batana sy ara-mekanika dia avo 1,5 heny noho ny an'ny nylon tsotra, ary avo ny tanjaky ny mekanika. Azo ampiharina amin'ny milina lehibe izy io. Izy io dia mahatohitra ny fitafiana sy ny fanosorana tena. Ny ain'ny katolika nilonan'ny MC dia avo 4-5 heny noho ny vy, vy ary pulley. Raha tsy manimba ny fitaovana fampakaram-bady, manao pulley crane, ny fiainana manohitra ny tady tariby dia mety hitatra in-10; ny maripana azo ovaina azo ovaina dia azo ampiasaina amin'ny -40 ℃ -100 ℃ 5. Afaka mifoka hovitrovitra izy, tsy mamoaka feo, milamina tsara ary manana toetra mampamono tena. , Azo antoka ampiasaina
MC nylon amin'izao fotoana izao no fitaovana mety indrindra hanoloana ny volamena tsy ferrous. Izy io dia be mpampiasa amin'ny injenieran'ny injeniera, angovo herinaratra, solika, fitrandrahana, arintany, metallurgy, fanaovana taratasy, fananganana, seranan-tsambo, fanodinana ary indostria hafa hanaovana pulley, slider, worm gears, gears ary blades. Isan-karazany ny faritra toy ny kodiarana kodiarana, mitondra kirihitra, amponga, seza valizy, peratra fanohanana, kapila fikosoham-bary, paosin-karama, fantsom-piraketana vy lehibe, sns.
Fahaizana manome: Jereo ny refin'ny fividianana
Andininy fonosana: Matetika izahay dia mampiasa sarimihetsika bubble miampy boaty baoritra, ary raha ilaina dia ampiasaina ny paleta hazo na boaty hazo. Ny entana madinidinika dia fonosina ao anaty kitapo fanaovana sonia tena + baoritra. Ny entana lehibe dia fonosina ao anaty kitapo hazo + boaty hazo.
Previous: Ny slc mc nylon maharitra ela dia avo lenta sy mateza
Manaraka: slider Nylon avo lenta ho an'ny karazana milina fanorenana
Ahoana no hiantohana ny kalitaon'ny vokatra？
Manana traikefa amin'ny famokarana am-polotaona maro izahay, fitaovana famokarana matihanina ary fitaovana fitiliana。
Azonao ampanjifaina ve ny vokatrao？
Tohano ny famaritana isan-karazany sy ny loko isan-karazany amin'ny fanaingoana, afaka manome antsika sary, afaka mamokatra mivantana
Ahoana ny fanoherana ny ranomaso
Ny tanjaky ny famatrarana vokatr'izany dia nitombo ary nihoatra ny lanjan'ilay lohasaha sahabo ho 2 tapitrisa. Amin'izao fotoana izao, mihombo ny atiny ary mihena ny tanjaka mampitondra heriny. Izany dia satria ny rojom-pirafitry ny molekiola dia manakana vonjimaika ny vokany amin'ny kristaly maivana, noho izany dia misy faritra amorôma lehibe ao amin'ny macromolecule biolojika, izay afaka mandevona sy hisitrika angovo kinetika lehibe.
Manokana amin'ny famokarana crane nylon s ...
slider Nylon avo lenta ho an'ny mach Mach ...
Famokarana matihanina ny tsindrona fiara ...
Long-fiainana mc nylon slider dia avo lenta sy d ...
Adiresy: No.1 Zone Chuzhou Industrial Industrial Zone A, Huai'an, Sina
Inona no fampiasana MC nylon
Tombony MC nylon rod